e.l.f.Studio cream eyeliner | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Studio cream eyeliner e.l.f.
It is smooth to wear on eyelids and stays all day long. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2015 ဒီဇငျဘာ 7
မျက်လုံးပေါ်တွင် ဆွဲရကောင်းပြီး တစ်နေကုန်ကြာရှည်ခံပါသည်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Studio cream eyeliner